NgoMgqibelo, Okthoba 20, 2007 NgoMgqibelo, Okthoba 20, 2007 Douglas Karr
Kade ngenza ukucabanga okuningi muva nje futhi ngifaka inkondlo nendodana yami empilweni, ukuba ngumzali, umsebenzi, ubudlelwano, njll. Impilo iza kuwe ngezigaba futhi uphoqeleka ukuthi uthathe izinqumo obungakaze ufune ukuzenza.
Isigaba 1: Umshado
Cishe eminyakeni eyi-8 eyedlule kwakuyisihlukaniso sami. Bekufanele ngithole ukuthi ngabe ngingakwazi yini ukuphatha ubaba 'wempelasonto' noma ngingashadile. Ngikhethe okwakamuva ngoba bengingeke ngiphile ngaphandle kwezingane zami.
Ngesikhathi sehlukaniso, kwakudingeka ngithole ukuthi ngizoba yindoda enjani. Ngabe ngizoba ngumyeni wangaphambili obethukuthele ohudulela ex yakhe ngaphandle nangaphandle kwenkantolo, okhulume kabi nge-ex yakhe ezinganeni zakhe, noma bengizothatha isibusiso sokuba nezingane zami ngithathe umgwaqo ophakeme. Ngikholwa ukuthi ngithathe umgwaqo ophakeme. Ngisakhuluma kaningi nowayengunkosikazi wami futhi ngithandazela nomndeni wakhe ngezikhathi ezithile lapho ngiyazi ukuthi badonsa kanzima. Iqiniso liwukuthi, kuthatha amandla amancane ngale ndlela futhi izingane zami zingcono kakhulu ngakho.
Isigaba 2: Umsebenzi
Emsebenzini, nami bekufanele ngenze izinqumo. Ngishiye imisebenzi engaphezu kwemibalwa emihle kule minyaka eyishumi edlule. Ngashiya eyodwa ngoba ngangazi ukuthi angisoze ngaba yilokho umphathi wami ayefuna ngibe yikho. Ngishiye enye muva nje ngoba angizange ngigcwaliseke mathupha. Ngiku- umsebenzi omuhle manje lokho kungiphonsela inselelo nsuku zonke ... kepha ngibona iqiniso ukuthi mhlawumbe ngeke ngibe lapha eminyakeni eyishumi kusukela manje, noma.
Akukona ukuthi anginakho ukungabaza, kungenxa yokuthi ngikhululeka ngokwengeziwe nge-'niche 'yami kwezokuMaketha nezeTekhnoloji. Ngithanda ukuhamba ngokushesha emsebenzini. Lapho izinto zehla futhi izinkampani zidinga lawo makhono angangithandi, ngibona ukuthi sekuyisikhathi sokuqhubeka (ngaphakathi noma ngaphandle). Ngibonile ukuthi lapho ngisebenzisa amandla ami, ngingumuntu ojabule kakhulu kunalapho ngikhathazeka ngobuthakathaka bami.
Isigaba 3: Umndeni
Ngisondela ku-40 manje futhi sengifikile iphuzu empilweni yami lapho kufanele ngithathe izinqumo nangobudlelwano bami futhi. Esikhathini esedlule, ngisebenzise amandla amaningi ekubeni nomndeni 'oziqhenyayo ngami'. Ngezindlela eziningi, umbono wabo wawubaluleke kakhulu kunowami. Ngokuhamba kwesikhathi, ngabona ukuthi balinganisa impumelelo yehluke kakhulu kunakuqala.
Impumelelo yami ilinganiswa injabulo yezingane zami, ikhwalithi nobungako bobungane obuqinile, inethiwekhi yami yabangane, inhlonipho engiyithola emsebenzini, nemikhiqizo nezinsizakalo engiziletha nsuku zonke. Ungaqaphela ukuthi isihloko, udumo noma ingcebo zazingekho lapho. Babengekho, futhi ngeke babe khona.
Ngenxa yalokhu, isinqumo sami kube ukushiya abantu ngemuva abazama ukungidonsela phansi esikhundleni sokungiphakamisa. Ngiyabahlonipha, ngiyabathanda futhi ngiyabathandazela, kodwa ngeke ngisebenzise amandla ami ukuzama ukubenza bajabule. Uma ngingaphumeleli ngombono wabo, bangagcina umbono wabo. Nginguye obangela injabulo yami futhi kufanele bamukele umthwalo wabo wemfanelo.
Njengobaba, ngijabule kakhulu ukuthi zingobani izingane zami njengamanje, futhi ngizithanda ngokungenamibandela. Izingxoxo zethu nsuku zonke zimayelana nalokho abaphumelele ukukwenza, hhayi ukwehluleka kwabo. Lokho kusho ukuthi, nginzima ezinganeni zami uma zingaphili ngokuvumelana namandla azo, noma kunjalo.
Amabanga endodakazi yami ehle kakhulu ngesonto eledlule. Ngicabanga ukuthi iningi lalo bekungukuthi impilo yakhe yezenhlalo ibibaluleke kakhulu kunomsebenzi wakhe wesikole. Kwamzwisa ubuhlungu lapho ethola amamaki akhe, noma kunjalo. Ukhale usuku lonke ngoba ujwayele ukuba ngumfundi we-A / B. Akukona ukuthi ngangiphoxeke kangakanani okwakubonakala, ukuthi wayephoxeke kangakanani.
UKatie uthanda ukuhola ekilasini futhi uzonda ukuba sezansi. Senze izinguquko ezithile - abekho abangane abavakashelayo ngobusuku beviki futhi abekho ukwakheka. Imake-up ibinzima… bengicabanga ukuthi uzongishisela izimbobo ngamehlo akhe. Kungakapheli isonto, amamaki akhe aqala ukubuya. Akasangishisi izimbobo kimi, waze wangihleka nangelinye ilanga emotweni.
Kuyisenzo esinzima socingo oluphakeme, kepha ngenza konke okusemandleni ami ukugcizelela okuhle, hhayi okubi. Ngizama ukuwaqondisa ohlangothini lolwandle oluhle, hhayi njalo ukubakhumbuza ngesiphepho esingemuva kwabo.
Njengoba izingane zami zikhululeka ngokuthi zingobani, ngikhula ngithanda kakhulu ukuthi ziba ngobani. Ziyangimangaza nsuku zonke. Nginezingane ezinhle kakhulu… kepha anginayo imibono eyiphutha yokuthi 'Ngicabanga ukuthi kufanele babe ngubani' nokuthi 'kufanele benze kanjani'. Lokho kufanele bakuthole. Uma bejabule ngabo, inkomba yabo empilweni, kanye nami… lapho-ke ngibajabulele. Indlela engcono kakhulu engingabafundisa ngayo ukubakhombisa ukuthi ngenza kanjani. UBuddha wathi, "Noma ngubani ongibonayo ubona imfundiso yami." Angikwazanga ukuvuma okuningi.
Isigaba 4: Injabulo
Ngikhumbula a amazwana isikhashana ubuyile 'kumngane omuhle', William ngubani obuze ukuthi, "Kungani amaKrestu ngaso sonke isikhathi kufanele azikhombe?". Angikaze ngiwuphendule lo mbuzo ngoba bekufanele ngicabange kakhulu ngawo. Wayeqinisile. AmaKrestu amaningi amemezela ukuthi angobani ngesimo 'esingcwele kunawe'. UWilliam unelungelo lokuphonsela abantu inselelo ngalokhu. Uma uzibeka phezu kwesisekelo, lungela ukuphendula ukuthi kungani ulapho!
Ngifuna abantu bazi ukuthi ngingumKristu - hhayi ngoba kungukuthi ngingubani kodwa ngoba yilowo engithemba ukuba ngolunye usuku. Ngidinga usizo ngempilo yami. Ngifuna ukuba ngumuntu onomusa. Ngifuna abangani bami bangibone njengomuntu obakhathalelayo, abafake ukumamatheka ebusweni babo, noma abakhuthaze ukuthi benze okuhlukile ngempilo yabo. Njengoba ngihleli emsebenzini ngisebenza nomthengisi onenkani noma isinambuzane engisombulula inkinga emibuthanweni, kulula kimi ukuthi ngikhohlwe isithombe esikhulu bese ngikhipha amagama ambalwa. Kulula kimi ukuthi ngithukuthelele abantu benkampani abanginika ubunzima.
Umbono wami (onqunyelwe) wezimfundiso engikholelwa kuzo ungitshela ukuthi labo bantu bakuleyo nkampani mhlawumbe basebenza kanzima, banezinselelo abazama ukuzinqoba, futhi bafanelwe ukubekezela kwami ​​nenhlonipho yami. Uma ngikutshela ukuthi ngingumKristu, kungivulela ukugxekwa lapho ngingumzenzisi. Ngivame ukuba ngumzenzisi (kaningi kakhulu) ngakho-ke zizwe ukhululekile ukungitshela ukuthi angisiye umKristu olungile, noma ngabe awunazo izinkolelo ezifana nezami.
Uma ngikwazi ukuthola isigaba 4, ngizoshiya lo mhlaba ungumuntu ojabule kakhulu. Ngiyazi ukuthi ngizoba nenjabulo yangempela… Ngiyibonile leyonjabulo kwabanye abantu futhi ngiyifunela nami. Ukukholwa kwami ​​kungitshela ukuthi lokhu kuyinto uNkulunkulu Ufuna nami ukuba. Ngiyazi ukuthi kuyinto ekhona ukuthi ithathwe, kepha kunzima ukulahla imikhuba emibi futhi sishintshe izinhliziyo zethu. Ngizoqhubeka nokusebenza ngakho, noma kunjalo.
Ngiyethemba ukuthi lokhu bekungathumeli kakhulu kuwe. Bengidinga ukukhipha okuncane ngezinkinga zomndeni wami futhi ukubhala ngokusobala kungisiza kakhulu. Mhlawumbe kuzokusiza nawe!
Tags: Ukufaka uphawuizethuloukukhangisai-slideshareukukhula kwe-slideshareizinqubomgomo ze-smidada elimnyamawp_footerikhanda
I-Oct 20, i-2007 ku-3: i-45 PM
Okuthunyelwe OKUKHULU! Futhi ngiyathanda ukwazi ukuthi angisiye kuphela umzali ojezisa ngokususa izimonyo. Indodakazi yami icabanga ukuthi i-eyeliner ngumngane wayo omkhulu. Kuyamangaza ukuthi "uyithola" ngokushesha kangakanani lapho engavunyelwe ukuba nayo. 🙂
I-Oct 20, i-2007 ku-4: i-04 PM
I-eyeliner iyisitha esinobaba oneminyaka engu-13. 🙂
Ngicabanga ukuthi ukwakheka kungumthambeka oshelelayo. Angikaze ngibe ngumuntu othanda ukwakheka okuningi futhi umbono wami ukuthi abesifazane basebenzisa kakhulu ngoba bayazisola ukuthi bahle kanjani ngempela. Ngakho-ke… uma uneminyaka engu-13, uzophela ubukeka njengePicasso lapho uneminyaka engama-30.
Ngekhefu lokwakheka, ngithemba ukuthi uKatie angabona ukuthi muhle kangakanani bese esebenzisa okuncane kamuva.
I-Oct 20, i-2007 ku-10: i-54 PM
Ngiyavuma. Yize amakhono endodakazi yami okukhipha ezambiwa esebenze kakhulu kulobubusuku njengoba bengilungiselela umbukiso weHallland Film Festival Crystal Heart Awards. Umemezele ukuthi "ngikwenza kabi" futhi waqamba amehlo ami kahle. Yebo, angiyena umlandeli omkhulu wezimonyo, ikakhulukazi i-b / c Angithandi ukuchitha isikhathi kuso. Abesifazane abaningi abayifaka nge-trowel kufanele bayeke b / c empeleni bahle kakhulu ngaphansi. Ungubaba omuhle ngokuzama ukufundisa indodakazi yakho ukuthi ubuhle buyini ngempela.
Okthoba 21, 2007 ngo-1: 53 AM
Hawu, yeka iposi uDoug! Ngisithanda kakhulu isimo sakho sengqondo.
Uyazi, kukhona ukungqubuzana okukhulu phakathi kobuKristu nobuSulumane uma kukhulunywa ngezindinganiso zomndeni nezenhlalo. Okuningi okushilo ukholelwa kukho kuyisibonelo sezimfundiso eziningi zamaSulumane. Kuyahlekisa ukuthi kwesinye isikhathi abangewona ama-Mulsims njengawe benza umsebenzi ongcono wokukhombisa amanani amaSulumane kunamanye ama-theme ama-Muslim.
Ngakho-ke ngalokhu, ngiyanethulela isigqoko! Gcina isimo sengqondo esihle. Uyi-blogger enhle, futhi uqinisekile njengoba isihogo sizwakala njengesihogo sikababa.
Okthoba 21, 2007 ngo-8: 18 AM
Kuyahlekisa ukusho njalo. Ngifunde i-Qur'an futhi nginabangane abathile abangamaSulumane. Njalo lapho sihlangana sithola okuningi okufana kakhulu phakathi kwezinkolo zethu. Ngiyabonga nokuncoma kwakho - angicabangi ukuthi ngingumzali omuhle ngendlela engingaba ngayo, kodwa ngiyazama!
UJames Chartrand - JCM Enterprises
Okthoba 21, 2007 ngo-5: 25 AM
Siyaxolisa ukukusho, kepha lokhu okuthunyelwe kungiphikisana nokuthi ngizikhiphe ohlwini noma cha - ngezizathu ezimbalwa:
1. Le yibhulogi emayelana nokumaketha (noma lokho umbono wami). Yize kukuhle ukufaka ubuntu futhi kuhle ukusho izinkolelo zakho, iposi elide ngenkolo langicisha.
Ungangizwa kabi; inkolo ilungile futhi ngiyazihlonipha izinkolelo zakho. Kepha inkolo ingeyami, futhi angicabangi ukuthi inendawo kubhulogi lebhizinisi. Ukube bengifuna ukufunda ngenkolo, bengizobhalisela amabhulogi anemibono yenkolo.
2. Ukubhala ngentombazane eyeve eshumini nambili ikhala usuku lonke ngamamaki amabi kungenza ngigule esiswini. Ingane ayidumazeki, kungenzeka ukuthi yesaba ukuphendula kwakho!
3. Ukubhala ngokujezisa ingane ngamamaki amabi ngemuva kokukhala usuku lonke (okuyinto engeyona impendulo ejwayelekile yamantombazane) kungenza ngizizwe ngigula kakhulu. Jezisa umuntu lapho enze okuthile okungalungile futhi ungazisoli, impela. Kepha lapho othile enze ukhetho olubi, wakuqaphela, wafunda kukho futhi ukulungele ukwenza kangcono ngokuzayo, ukushiye lapho. Vumela intombazane yakhe ukuzethemba. Myeke enze kangcono ngoba efuna - hhayi ngoba esaba isijeziso.
Ngiyakuhlonipha ukuthi ungavumelana nami noma cha. Ngivele ngacabanga ukuthi ungathanda ukwazi ukuthi kungani lokhu okuthunyelwe kwebhulogi kuphuthelwe uphawu ngokuphelele nami.
Okthoba 21, 2007 ngo-8: 30 AM
Siyabonga ngokuthatha isikhathi sakho ukubhala. Uma uzizwa uphoqelekile ukuthi uzikhiphe ohlwini, ngizoxolisa ukukubona uhamba kodwa ngikulungele lokho. Le akuyona ibhulogi yenkampani, eyomuntu siqu. Ngakho-ke, ngeluleka abafundi bami ngomsebenzi wami wobuciko kepha futhi ngiyabonakala lapho ngidlulisela izinkolelo zami kubafundi bami.
Ngokuhamba kwesikhathi, ngibe ngabangane abakhulu nabafundi be-blog yami - ikakhulukazi engxenyeni yokuthi ngihlanganyela kokubili umsebenzi wami nempilo yami nabafundi bami. Ngiyavuma; kodwa-ke, gcina engikubhalayo kusigaba sami “Ekhaya Elingaphambili” ukuze ugweme ukuwafunda uma ungathanda.
Ngiyawuhlonipha umbono wakho ngokwenzekile nendodakazi yami. Indodakazi yami ayivaleleki ndawo :), inokusetha okuningana… iselula, isidlali se-mp3, ikhompyutha, ithelevishini, njll. Ngakho-ke 'ayijeziswa' yize ukukhipha izimonyo yikhona okwakumnika ubunzima. Ngingakuqinisekisa ukuthi akangisabi. Angaphatheka kabi uma ecabanga ukuthi ungiphoxile, kepha angikaze nginikeze uKatie isizathu 'sokwesaba'.
Angiqiniseki kangako, lapho ngineminyaka engu-13, bekufanele ngabe ngiyamvumela ukuba agqoke izimonyo kepha uyintombazane enhle enamabanga amahle nesimo sengqondo esihle - ngakho-ke ngiyazama ukumnika inkululeko ayifunayo. Lapho engikhombisa ukuthi uyakwazi ukuyiphatha, angikaze ngimbekele imingcele. Uma ungumzali, uyazi ukuthi zinzima kangakanani lezi zimo.
Ngithemba ukuthi uhlala uzungeze futhi ungazi! Kunemininingwane emihle kule bhulogi futhi ngiyathanda ukwabelana engikufundayo embonini.
Okthoba 21, 2007 ngo-9: 28 AM
Kulungile, Doug. Ngine-blog yebhizinisi kanye nesigaba esibizwa nge- "Personal Ramblings" sohlobo olufanayo lwezinto. Ukuhlelwa kwendawo nokufakwa kwayo kuze kube manje kunginikeze umbono wokuthi kwakuyibhulogi lebhizinisi eliqinile.
Ngizithola ngisesimweni esiyinqaba kakhulu kwi-Intanethi. NgingowaseCanada, futhi isiko lethu livame ukuthula kakhulu ngenkolo kunabomakhelwane bethu baseMelika, abaningi babo abavame ukuba nokweqisa (ngokombono wami, futhi angisho ukuthi uyizishoshovu). Ngiyazihlonipha izinkolelo zabantu futhi nginezami, angikuthandi ukuphoqwa ngenkani.
Ngeshwa, lokho kweqisa kungishiye ngikhathazekile kakhulu ngokushaywa ngebhayibheli, futhi i-radar yami yokuqhuma okungenayo kubonakala sengathi ibekwe ekuzweleni okuphezulu. Ngakho-ke uma ngingeke ngishaywe lapha, ngizonamathela. Idili elifanele?
Ngokuqondene namadodakazi… Kuhle ukuzwa ukuthi uyabona ukuthi intsha iyayidinga le nkululeko, futhi ngiyabonga ngokukucacisa lokho. Ngikholelwa ngokuqinile lapho i-leash iqina, lapho abazali bezibeka enkingeni ngokwengeziwe. Futhi angibatholi abazali abasebenzisa isandla esinzima nezingane zabo. Akuyona nje impendulo.
Futhi… Nginengane eneminyaka engu-14 ubudala nengane encane, ngakho ngiyakwazi ukuziqonda izinselelo zokuba ngumzali namandla okwenza izimonyo.
Ngiyabonga futhi ngempendulo yakho. Benginokuphendula okuncane (kulungile okuningi) kokuphendula emadolweni, ngakho-ke ukuze ngihlanganyele okuncane ngami ukuze ungacabangi ukuthi ngiyimbongolo ephelele, funda kokuthunyelwe kwami ​​mayelana nokusabela kwamadolo.
Okthoba 21, 2007 ngo-10: 24 AM
Thina baseMelika sithanda ukushova konke ebusweni babo bonke - impi, ingcebo, ubuchwepheshe, umculo, inkolo… uyiqamba igama futhi siyaziqhenya ngokuthi sikumosha kabi kanjani! Lapho omunye wethu eqotho, kunzima ukusithatha ngokungathi sína.
Ngahlala eVancouver iminyaka eyi-6, ngathola iziqu e-High School lapho. Eqinisweni, uhlangothi lomama wami lomndeni wonke angamaCanada. Umkhulu wami uyisikhulu esithathe umhlalaphansi emabuthweni aseCanada. Ngingumlandeli omkhulu waseCanada futhi ngisengakwazi ukucula iculo (ngesiNgisi, ngikhohlwe uhlobo lwesiFulentshi). Umama nguQuebecois, owazalelwa eMontreal futhi wakhulela khona.
Ngihlekisa nabangani bami basesikoleni esiphakeme ukuthi iMelika ibingakwazi ukucela ithoyizi elingcono kuneCanada!
Ngiyabonga ngempendulo yakho ecabangelayo… angikaze ngiyithathe ngaleyo ndlela.
Okthoba 21, 2007 ngo-10: 59 AM
Kubukeka njengomlando wakho oyinhloko. Kepha okuthunyelwe kwakho kune-gushy impela. Ngiyethemba uthola injabulo eyengeziwe nsuku zonke!
I-Oct 21, i-2007 ku-9: i-20 PM
I-Oct 21, i-2007 ku-4: i-55 PM
Ngizokuthumela ama-toques we-Xmas 🙂
I-Oct 21, i-2007 ku-9: i-21 PM
Kuyamangalisa! Futhi mhlawumbe amanye ama-Labatts!